हामी कम्प्युटर सबैले काम गर्न सक्ने बनाउन चाहन्छौं, यहाँको शारीरिक अवस्था जस्तोसुकै होस्। त्यसैले, हामी त्यस्ता उपकरणहरू उपलब्ध गराउछौं जसले उबुन्टुलाई सबैभन्दा पहुँचसम्पन्न सञ्चालन प्रणालीमध्येको एक बनाउँछ।
<em>Appearance Preferences</em> हेर्न पनि सम्झनु होला. बिभिन्न visual styles बिच छान्न सक्नु हुनेछ र अप्प्लिकाशन्स हरुले प्रयोग गर्ने शब्दावली हरु समेत बदल्न सक्नुहुनेछ.
उबुन्टुसँग मद्दत प्राप्त गर्दै
हाम्रो विस्तृत लिखित मद्दतको अतिरिक्त उबुन्टु समुदाय व्यक्तिगत तथा इन्टरनेट मार्फत निःशुल्क प्राविधिक समर्थन प्रदान गर्दछ। क्यानोनिकल, यसको साझेदार तथा अनुमोदित कम्पनीहरूद्वारा व्यापारिक समर्थन पनि उपलब्ध छ। थप जानकारीको लागि <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a> मा जानुहोस्।
उबुन्टु प्रतिस्थापन छिट्टै समाप्त हुँदैछ। आशा छ तपाई उबुन्टुको आनन्द प्राप्त गर्नुहुनेछ।